Fampiharana 1 mampiaraka
Toerana sy fampiharana 15 mampiaraka tsara indrindra amin'ny 2021: Lisitry ny lozisialy mampiaraka an-tserasera an-karazany isan-karazany
Betsaka ny tranonkala mampiaraka sy ny fampiharana ankehitriny ary manontany olona momba ny tranonkala ankafizin'izy ireo dia hanana valiny tsy manam-paharoa toa ilay olona ihany.
Na dia mety mitady fitiavana sy fanambadiana aza ny olona sasany, ny hafa mety mitady zavatra tsy dia mahazatra loatra.
Ny tranonkala mampiaraka tsara indrindra dia manome karazana sy fiainana manokana marobe, ankoatra ireo fiasa hafa. Ity lahatsoratra ity dia mikendry ny hametraka ny tranonkala mampiaraka tsara indrindra amin'ny toe-javatra manokana sy tanjon'ny fifandraisana.
Ny tsara indrindra ho an'ny fifandraisana matotra - Eharmony
Ny tsara indrindra ho an'ny matihanina miasa - EliteSingles
Tranonkala mampiaraka maimaim-poana - Okcupid
Tranonkala mampiaraka tsy vanona indrindra - AdultFriendFinder
Fampiharana mampiaraka lehibe indrindra - Tinder
Toerana mampiaraka zokiolona tsara indrindra - SilverSingles
Rafitra fampifanarahana toetra manokana - Hinge
Ny tsara indrindra ho an'ny mpitovo kristiana - ChristianMingle
Toerana mampiaraka tsara indrindra - AshleyMadison
Fampiharana mampiaraka tsara indrindra ho an'ny vehivavy - Bumble
Vehivavy betsaka kokoa noho ny lehilahy - Mitady
Toerana mampiaraka matotra ho an'ny latsaky ny 30 taona - Zoosk
Ahoana no nanombanana ireo toerana mampiaraka tsara indrindra:
Heverin'ny mpampiasa - Isaky ny tranonkala mampiaraka dia nijery hevitra momba ny fivarotana app izahay, fifanakalozan-kevitra momba ny forum, ary hevitra momba ny trustpilot hahitana tranokala manana isa ambony indrindra amin'ny sokajy nomena.
Tsiambaratelo sy filaminana - Samy nandre na nahatsiravina na nampidi-doza ny tantara mahatsiravina tamin'ny daty an-tserasera. Ny tranonkala mampiaraka tsara indrindra dia manasongadina ny tsiambaratelo momba ny tsiambaratelo ary koa ny mpanelanelana hiditra an-tsehatra raha toa ka tsy mahomby na mampidi-doza amin'ny hafa ny mpampiasa.
Endri-javatra tsy manam-paharoa - Ny tranonkala mampiaraka sasany dia manolotra safidy fihaonana mivantana fotsiny, na amin'ny alàlan'ny chat na antso an-tsary. Ny hafa dia manampy ny olona hahita ny lalaony amin'ny lalao mifanentana, ny safidy sivana ary maro hafa. Ireo fiasa fanampiny ireo dia manondro vintana tsara kokoa amin'ny fahombiazana.
Toerana mampiaraka tsara indrindra 15 ho an'ny 2021
1. Eharmony - Ny tsara indrindra ho an'ny fifandraisana matotra
Mpivady an-tapitrisany no ampifandraisin'i Eharmony — raha ny tena izy, mpampiasa 400+ manambady olona hitany ao amin'ny tranonkala isan'andro. Nahazo loka mihitsy aza ilay sehatra ho tranonkala tsara indrindra hahitana fifandraisana marin-toerana.
Eharmony dia mitaky ireo mpampiasa hamita fanadihadiana lava mandritra ny fisoratana anarana, izay miasa ho toy ny "rafitra mifanentana." Mampiasain'ity tranonkala ity ity fampahalalana ity hanehoana ireo mpampiasa amin'ny safidy mety hahomby amin'ny fiarahana.
Ity metodolojika mifantina sy voafantina ity no antony mahatonga an'i Eharmony safidy tsara indrindra ho an'izay mitady fifandraisana maharitra.
2. Singles Elite - Ny tsara indrindra ho an'ny matihanina miasa
Ny maha-mpikambana an'i Elite Singles dia tena mahafeno fepetra, ka mahatonga azy io ho safidy tsara indrindra raha mitady resaka mandrisika ny mpampiasa. Manodidina ny 85 isan-jaton'ny mpandray anjara no manana mari-pahaizana ambony, ary 90 isan-jato no mihoatra ny 30 taona. Ireo statistika ireo dia manatsara ny fiainana ny fiainana amin'ny fampitoviana amin'ny fiarahana.
Ny tranonkala dia mifanandrify amin'ireo mpampiasa amin'ny tokan-tena hafa amin'ny alàlan'ny algorithm iray mifantoka amin'ny valintenin'izy ireo momba ny fanontaniana. Ny ankamaroan'ny olona dia mampiasa azy io amin'ny fikatsahana fiaraha-miasa maharitra, na an-trano izany na any ivelany. Miasa amina firenena 25 izy izao.
3. AdultFriendFinder - Tsara indrindra ho an'ny hookup
Ity tranonkala ity dia tsy natao ho an'izay mitady fifandraisana maharitra. Manome safidy roa voalohany izy: filalaovana (amin'ny app) na fidirana. Izay ilay izy, ary ho an'ny olona sasany, izany indrindra no tadiavin'izy ireo.
Ny AFF, na ny Finderan'ny olon-dehibe dia ahitana karazana safidy fifampiresahana, ao anatin'izany ny fandefasan-kafatra, horonantsary ("daty an-tserasera"), fahana mivantana ary resaka ifanaovan'ny mpiara-monina.
Ny fisoratana anarana amin'ny fampiharana ity dia tsotra. Tsy toy ny tranonkala mampiaraka hafa izay mila fangatahana fanontaniana, ny AFF dia mitazona izany mandritra ny dingana 30 segondra. Afaka manomboka mitady avy hatrany ireo mpampiasa.
4. SilverSingles - Ny tsara indrindra ho an'ny mpitovo 50 taona mahery
SilverSingles dia efa nandritra ny 17 taona ary iray amin'ireo fampiharana mampiaraka tranainy indrindra ho an'ny olona mihoatra ny 50. Manamarina an-tanana ny mombamomba azy tsirairay avy ny serivisy, manome antoka fa tena misy sy azo antoka ny mpanjifany.
Ireo mpampiasa dia mameno ny fangatahana fanontaniana amin'ny antsipiriany izay misy ny drafi-piainan'izy ireo, ny laharam-pahamehana, ny fihetsika ary ny antsipiriany hafa, mba hahafahan'ny tranonkala manivana ireo lalao mifanentana amin'izany.
Ny sehatra dia azo alefa amin'ny alàlan'ny tranokala na rindranasa finday izay tsy andoavam-bola ny maha-mpikambana fototra.
5. Bumble - Safidy lehibe ho an'ny vehivavy
Tsy fahita firy amin'ireo rindrambaiko mampiaraka ny Bumble satria manome fahefana ny vehivavy hanomboka fifandraisana. Ny lehilahy dia tsy afaka mifandray amin'ny lalao vehivavy raha tsy hoe ny vehivavy no manao fifandraisana voalohany. Io dia mamela ny vehivavy hitarika indray mandeha.
Mifantoka amin'ny fifandraisana eo no ho eo ny sehatra. Manana 24 ora hifandraisana ireo mpampiasa ary aorian'izay dia tapitra ny lalao. Midika izany fa ny tranokala dia mifantoka amin'ny hookups tampoka, fa mety ihany koa ho an'ireo izay tsy tia mandany fotoana be dia be amin'ny fizahana manodidina.
Ny rindranasa dia miombona tsara amin'ireo sehatra tambajotra sosialy toy ny Facebook, Spotify, ary Instagram, ahafahan'ny mpampiasa mampiseho ny lafiny samihafa amin'ny toetrany. Ny kaonty dia voamarina ihany koa mba hanalavirana ny mombamomba anao sandoka tsy hipoitra matetika.
6. Hinge - fampiharana mampiaraka vaovao
Namerina namoaka an'i Hinge ny orinasa tamin'ny taona 2016, ary izy io dia iray amin'ireo fampiharana mampiahiahy matetika resahina tato anatin'ny taona vitsivitsy, azo inoana fa noho ny taham-pahombiazan'ny mpampiasa azy. Manodidina ny 75 isan-jaton'ny mpampiasa Hinge no misafidy ny handeha amin'ny daty faharoa aorian'ny fihaonany amin'ny lalaon'izy ireo.
Ireo manana ny piraofilina Hinge dia afaka mamela famerenana ihany koa, izay ampiasain'ny rindrambaiko Hinge avy eo mba hanampiana ny famolavolana ny algorithman'ny lalao amin'ny ho avy.
Ny sehatr'i Hinge dia mahaliana satria mandrisika ny mpampiasa hitia na haneho hevitra amin'ny faritra iray amin'ny mombamomba ilay olona iray hafa. Manome fomba iray hifaneraserana amin'ny olona mihoatra ny resaka mahazatra.
8. Mitady - Ho an'ny dadan'ny siramamy sy zazakely misy siramamy
Tsy manam-paharoa ny fikatsahana satria mifantoka amin'ny fampifandraisana ireo tanora kokoa (zazakely siramamy) amin'ireo dadany siramamy be taona sy manankarena. Raha ny fahitana azy, mahazatra kokoa noho ny ankamaroan'ny mino izany, raha jerena dia manana mpanjifa 10 tapitrisa mahery ilay sehatra. Ny olona tsirairay dia afaka mamaritra ny fetrany alohan'ny hifandraisany, na te-hivezivezy izy ireo, mitaky vola fanampiana, na famaritana hafa.
Misy ny tahan'ny vehivavy sy ny lahy avo, izay midika fa manana safidy betsaka hisafidianana ny daddy, na dia manondro aza fa ny fifaninanana dia mety ho masiaka ho an'ireo zazakely.
9. JDate - Ireo mpitovo jiosy ihany
JDate dia serivisy mampiaraka ho an'ny mpitovo jiosy irery. Niorina tamin'ny 1997 izy io ary azo zahana any amin'ny firenena maherin'ny 100, mamela ny mpampiasa hifampiresaka amin'ny mpitovo jiosy amin'ny fiteny dimy (anglisy, hebreo, frantsay, alemanina ary espaniola).
Raha resaka fampakaram-bady jiosy an-tserasera dia tompon'andraikitra amin'ny fampitahana mihoatra ny 50 isan-jaton'ireo mpivady ireo i JDate.
Ny mpampiasa dia afaka mifandray na iza na iza miaraka amin'ny mpikambana maimaimpoana na karama. Ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia manamarina ny mombamomba azy ireo tsirairay avy mba hahazoana antoka fa noforonin'ny tena mpanjifa izy io.
10. ChristianMingle - tranonkala mampiaraka Kristiana tsara indrindra
ChristianMingle dia manampy ireo mpampiasa ao amin'ny fiarahamonina kristiana amin'ny fahitana ny fitiavany mandrakizay. Mirehareha amin'ny mpampiasa 1 tapitrisa mahery izy io, ary mamporisika mazava tsara ny “fiarahana miorina amin'ny finoana” ny tranonkala mba hananana fotoana maharitra.
Misy safidy kaonty maimaim-poana na mpikambana isam-bolana amin'ny $ 29.95. Ity farany ity dia tonga niaraka tamin'ny antoka, izay ahafahan'ny mpampiasa mandray enim-bolana maimaim-poana aorian'ny fahatongavany ho enim-bolana voalohany raha tsy mahita mety.
11. Zoosk - Fiaraha-monina iraisam-pirenena lehibe
Zoosk dia mirehareha amin'ny iray amin'ireo sehatra lehibe indrindra amin'ny sehatra iraisam-pirenena, miaraka amin'ireo mpikambana 40 tapitrisa manerantany. Isan'andro, ireo mpampiasa ireo dia mandefa hafatra maherin'ny 3 tapitrisa amin'ny fiteny 25 samy hafa. Zoosk miasa amin'ny firenena 80 mahery.
Ny tranonkala dia mampiasa zavatra antsoina hoe "haitao fanaovana lalao" mba hanampiana ireo mpitovo mahita olona mifanentana izay mety mitovy amin'ny lalao natao tany an-danitra.
Aorian'ny fotoam-pitsarana maimaim-poana dia mitentina $ 29,99 isam-bolana ny mpikambana ao amin'ny Zoosk.
12. Reddit R4R - Ny tsara indrindra ho an'ireo mpampiasa Reddit
R4R, na Redditor ho an'ny Redditor, dia subreddit natokana hampifandray ireo mpampiasa. Tsy mampiasa tetika fampifanarahana ny sehatra, fa kosa toerana lehibe anaovana doka manokana.
Ny mari-pahaizana fikarohana ataon'ny mpampiasa dia mitondra ny valiny tiany. Ny mpanjifa Reddit dia mampiasa azy io hahitana hetsika, namana, fety, fanamafisana, ary na dia fifandraisana maharitra aza.
Na dia forum ankapobeny aza dia mbola misy ny fitsipika mifandraika amin'ny taona, fiainana manokana, ara-dalàna ary fitondran-tena. Ohatra, avela ny lahatsoratra NSFW fa tsy maintsy asiana marika toy izany mba hahafahan'ny mpampiasa manapa-kevitra raha te hijery ilay lahatsoratra na tsia.
13. OkCupid - Malalaka sy malaza
OkCupid dia iray amin'ireo tranonkala mampiaraka fanta-daza indrindra ary manasongadina piraofilina feno izay azon'ny mpikambana hafa atao scan aloha alohan'ny mampifandray azy. Izy io dia azo jerena ao amin'ny biraonao sy amin'ny telefaona finday, miaraka amin'ny antsipiriany be dia be azon'ireo mpampiasa fenoy ny valiny tsara indrindra.
Tena feno ny tranokala, miaraka amin'ny safidy mihoatra ny 20 ny lahy sy ny vavy ary ny fironana momba ny firaisana.
14. Ashley Madison - tranonkala mampiaraka tsara indrindra
Ashley Madison dia iray karazana, natao ho an'ny olona manambady izay mitady hanana raharaham-barotra manokana. Tsy mifandray amin'ny kaonty media sosialy noho io antony io.
Misy fameperana sy fiasa manokana momba ny tsiambaratelo hanampiana ireo mpampiasa hijanona tsy mitonona anarana raha matahotra ny ho tratra izy ireo. Ankoatr'izay, Ashley Madison dia manana safidy fitsangatsanganana ahafahan'ny mpikambana mikaroka mialoha ny toerana ho avy.
Match.com - Ny match dia efa nisy nanomboka tamin'ny 1995 ary manolotra programa mpanoro hevitra momba ny fampiarahana daty virtoaly hanampiana ireo mpandray anjara amin'ny filokana sy ny hevitra mampiaraka.
Tinder - Malaza be ity fampiharana fampiarahana ity ary azo atokisana. Ny ankamaroan'ny olona dia mampiasa azy io ho an'ny hookup, raha jerena ny base mpampiasa azy marobe sy ny algorithms tarihan'ny toerana.
BlackPeopleMeet - Nandritra ny 18 taona mahery, BlackPeopleMeet dia nampifandray ireo mpitovo afrikanina amerikana mitady fitiavana. Ny mpikambana 100 000+ ao amin'ilay tranonkala dia afaka milalao, mandefa mailaka ary mahita hoe iza no mahita ny mombamomba azy ireo.
Grindr - Grindr dia natokana ho an'ny olona LGBTQA +. Izy io dia miorina amin'ny toerana misy azy, ary ny mpampiasa dia mampiasa azy io amin'ny alalàn'ny fametahana azy, na dia azo atao aza ny lalao maharitra.
Trondro betsaka - Miorina Kanadiana ity tranonkala mampiaraka ity, fa mamela ny mpampiasa hifampiresaka amin'ny olona manerantany.
Maninona ny olona no mampiasa tranonkala mampiaraka amin'ny Internet?
Ireo tranonkala mampiaraka dia mampiharihary olona amin'ny dobo filomanosana betsaka lavitra noho ny olona tokana manana vintana hihaona amin'ny tena fiainana. Izany indrindra no zava-misy ho an'ireo mpampiasa manana vondrona sosialy voafetra, vaovao amin'ny tanàna, na amin'ny fomba hafa.
Ny fampiasana ireo tranonkala ireo dia afaka mamela ny mpampiasa hisafidy bebe kokoa mifototra amin'ny masontsivana izay manan-danja amin'izy ireo: soatoavina zaraina, fialamboly, na karazana fifandraisana tadiavin'izy ireo.
Milamina ve ny fampiharana mampiaraka?
Amin'ny ankapobeny, eny, azo antoka ny fampiharana mampiaraka nefa mbola mila fahaiza-manavaka sy fitandremana ihany izany. Ny app dia manana fampiasa amin'ny fiainana manokana mba hanampiana ireo mpikambana, toy ny fanamarinana ny mombamomba. Ny tranokala sasany ihany koa dia manara-maso ireo mpandray anjara amin'ny tanana, manampy fiarovana fanampiny amin'ny fizotrany.
Ny olona dia tsy tokony hanome fampahalalana manokana alohan'ny hihaonana amin'ny olona amin'ny tena fiainana, toy ny anaram-bosotra, ny adiresy, na ny manodidina azy aza. Hendry koa ny mandamina daty voalohany amin'ny habaka ampahibemaso. Ny fifandraisana amin'ny namana mialoha sy ny fampahafantarana azy ireo fa miaraka amin'ny olon-tsy fantatra izy ireo dia tsy hevitra ratsy ihany koa.
Ahoana no hiantohana ny fiarovana anao eo amin'ny Internet?
Aza manome fampahalalana manokana amin'ny olona an-tserasera mihitsy, indrindra alohan'ny fihaonanao mivantana. Ity fampahalalana ity dia misy ny anarana, mpampiasa, adiresy, ary koa ny manodidina.
Rehefa mifanena amin'ny olona amin'ny Internet ianao dia mandamina ny daty voalohany hanaovana izany amin'ny toerana ampahibemaso. Mety ho cafe, hotely, teatra, na toerana hafa ho an'ny daholobe ity. Aza atao faritra mitokana toa ny morontsiraka ary aza avela hiditra ao an-trano mihitsy ny olon-tsy fantatra.
Farany, mifandraisa amina namana alohan'ny daty hampahafantarana azy ireo ny misy sy ny fotoana fiverenana mialoha. Ampahafantaro azy ireo rehefa tonga ny fotoana andehanana mody. Mba hanomezana fiarovana fanampiny, angataho izy ireo hiantso na handefa hafatra mandritra ilay daty mba hiantohana ny fiarovana azo antoka.
Soso-kevitra amin'ny daty voalohany
Mety mampiahiahy ny mampiaraka voalohany! Mba hiantohana ny fiarovana azo antoka sy hahatratrarana mivantana ny lalao dia araho ireto torohevitra ireto:
Aza hadino ny misaina. Mety samy hafa be amin'ny olona ny olona raha oharina amin'ny Internet, koa miomàna amin'izay hiova ny safidiny.
Aza atao ara-dalàna loatra. Ny fametrahana fivoriana ara-tsosialy, toy ny daty fisakafoanana, dia ahafahan'ny mpiserasera mifankahalala nefa tsy mahatsiaro ho voatery handany ora maro.
Avereno jerena ireo resaka alohan'ny handehananao daty. Vakio indray ny mombamomba ilay olona ary avereno jerena izay noresahina, ary mandamina foto-dresaka ankapobeny.
Azo atao ve ny mamorona fifandraisana matotra rehefa mampiaraka amin'ny Internet?
Eny, azo atao izany! Raha mifanena ny olona roa, mifanentana ary misy ny simia dia mety hivadika zavatra milamina sy azo antoka ny fifandraisana. Mitranga isan'andro izany, noho ireo tranonkala toa an'i Eharmony.
Ireo tranonkala mampiaraka amin'ny Internet amin'ny famaranana
Ny fikafika amin'ny fiarahana amin'ny Internet dia ny hahafantaran'ilay olona izay tadiaviny sy ilainy ao anatin'ny fifandraisana iray mialoha. Miorina amin'ny lisitra etsy ambony, misy karazana fifandraisana marobe hita ao amin'ireo tranonkala ireo.
Mitandrema fa ny saina malalaka raha mampiasa tranokala mampiaraka. Ny tranokala tsirairay eto dia manana zavatra hatolotra, arakaraka ny zavatra tadiavin'ny mpampiasa.
Tsidiho tigersoftinder.com raha mila fampitahana sy famerenana vokatra bebe kokoa.
Fialana andraikitra: Ny fampahalalana dia tsy midika ho torohevitra na tolotra hividy. Izay mety hividianana ny fanambarana an-gazety etsy ambony dia atahorana anao. Manontania mpanolotsaina manam-pahaizana manokana na matihanina alohan'ny fividianana toy izany. Ny fividianana rehetra vita amin'ity rohy ity dia miankina amin'ny fepetra farany sy faran'ny fivarotana an-tranonkala voalaza ao amin'ny loharano. Ny mpitory atiny sy ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fidinana any ambany dia tsy mandray andraikitra mivantana na ankolaka. Raha manana fitarainana na olana momba ny zon'ny mpamorona mifandraika amin'ity lahatsoratra ity ianao dia mifandraisa tsara amin'ilay orinasa miresaka an'ity vaovao ity. Ireo rohy voarakitra amin'ity famerenana ny vokatra ity dia mety hiteraka komisiona kely amin'ny mpanoratra raha misafidy ny hividy ny vokatra atolotra anao ianao nefa tsy andoavam-bola fanampiny ho anao.
15 amin'ireo fampiharana mampiaraka an-tserasera tsara indrindra hahitana fifandraisana
Manantena ny hilentika hiverina any amin'ny tontolon'ny mampiaraka ve ny tongotrao aorian'ny fotoana maharitra fanazaran-tena lavitra? Raha sarotra ny mifanitsy amina mpiara-miasa vaovao amin'ny "talohan'ny fotoana" - dia nanampy trotraka kokoa ny fitadiavana areti-mifindra na fifandraisana. Mandritra io ara-dalàna vaovao io, ny filalaovana filamatra mety ho avy amin'ny fampiharana mampiaraka amin'ny Internet no mety ho fomba tsara indrindra hahafantarana olona iray.
Fa ny tena marina dia mety hahatsapa ho mavesatra ny mampiaraka amin'ny Internet. Tsy hoe mila mamoaka didim-pitsarana mifototra amin'ny sary roa sy biolo tsipika iray fotsiny, na ny maha-hafahafa ny fandefasana hafatra mivantana (na DM) amin'ireo olon-tsy fantatra vao ho matoatoa. Ny isan'ny fampiharana sy mpampiasa marobe dia afaka manao swiping fotsiny ho toy ny asa lehibe.
Raha ny marina, ny mpihaino mampiaraka amin'ny Internet dia antenaina hitombo ho 37.5 tapitrisa mpampiasa amin'ny 2023, raha ny angom-baovao avy amin'ny Statista. Ary amin'ny 2040, eHarmony dia naminavina fa 70 isan-jaton'ny mpivady no hanomboka ny fifandraisany amin'ny Internet. Azo atao ny manao an'io tontolo mampiaraka io hahatsapa ho azo tanterahina, na izany aza — mila mahita ilay rindranasa mety fotsiny ianao. Ohatra, misy sehatra manokana ho an'ireo izay tia fambolena , bacon , na mikoty volombava (eny, matotra tokoa).
Ka raha mitady hanao fifandraisana malalaka kokoa ianao, dia lazao fa misy olona mihoatra ny 50 taona, vao avy nampiaraka aorian'ny fisaraham-panambadiana, manantena daty video virtoaly, na mitady fifandraisana, ireo fampiharana mampiaraka amin'ny Internet (ny sasany, na maimaim-poana aza) dia manarona ny rehetra ny fototra.
Ny match no fampiharana mampiaraka amin'ny Internet malaza indrindra any amin'ny fanjakana 17 raha ny fanadihadiana nataon'ny PCMag ho an'ny olona 2.000. Amin'ny maha-iray amin'ireo serivisy mampiaraka OG (nifindra tamin'ny tranokala ihany izy io ho an'ny tranonkala sy fampiharana), ny Match dia manana antso manokana ho an'ireo eo anelanelan'ny 45 sy 65 mitady fifandraisana matotra; fikarohana fanampiny nataon'ny SurveyMonkey dia nahita fa 58 isan-jaton'ny olon-dehibe 45-54 taona no mampiasa Match, mihoatra ny avo roa heny amin'ny isan-jato izay mampiasa Tinder. Azonao atao ny misintona azy maimaim-poana, na dia hametra anao hijerijery aza izany; raha te handefa hafatra ho mpiara-miasa mety ho izy ianao dia manomboka amin'ny $ 21.99 isam-bolana ny famandrihana.
Ny fampiharana mampiaraka dia tsy natao ho an'arivony taona fotsiny; 20 isan-jaton'ny mpampiasa internet eo anelanelan'ny 55 ka hatramin'ny 64 taona no nampiasa fampiharana na serivisy fampiarahana, raha ny valim- panadihadiana iray avy amin'ny orinasa teknolojia sy mpikaroka momba ny maraina, Consult. Ny OurTime dia mamadika ny hevitra momba ny kolontsaina hookup eo an-dohany; fa kosa, manentana ny mpampiasa hikaroka pals pen, namana, daty, fifandraisana maharitra sy mpivady. Ny rindranasa misintona maimaim-poana dia mamela anao handefa mailaka, hifanadala ary hifanaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka mety aminao, ary ny famandrihana premium ($ 38 isam-bolana) dia ahafahana manasongadina fanampiny toy ny fahaizana mahita hoe iza no tia ny mombamomba anao.
Niavaka i Bumble amin'ireo serivisy mampiaraka hafa rehetra izay feno ny fivarotana app amin'ny alàlan'ny fitakiana ny vehivavy hanao ny hetsika voalohany raha vantany vao vita ny lalao. Mahazo 24 ora ihany koa ianao handefasana hafatra, raha tsy mampiasa vola amin'ny maha-mpikambana an'i Boost ianao, izay manomboka amin'ny $ 10,99 mandritra ny herinandro. Tian'ny vehivavy ny fampiharana satria mampihena ny isan'ny hafatra tsy ampoizina, ary ny lehilahy dia tia azy — raha ny marina, ny 58 isan-jaton'ireo namaly izay aleony ny fanadihadiana nataon'i Bumble tamin'ny PCMag dia lehilahy avokoa - satria mitaky ny tsindry sasany amin'ny fanombohana. Fanampin'izay, raha vao mahita olona tianao ianao dia afaka misafidy amin'ny fandefasana daty horonantsary anaty fampiharana.
Mety nitondra "culture hookup" i Tinder, saingy mbola iray amin'ireo fampiharana mampiaraka ambony any Etazonia izy io. 8 tapitrisa eo ho eo ny mpampiasa azy, ny ankamaroan'ny fampiharana mampiaraka hafa nanombatombana an'i Statista . Midika izany fa manana vintana matanjaka tsara ianao amin'ny farany hifaneraserana amin'ny olona manaitra ny fahaliananao-na dia mitaky fikosehana havia be vao tonga any. Maimaimpoana ny fampiharana, saingy afaka miditra amin'ny endri-javatra premium toa ny Tinder Plus ianao manomboka amin'ny $ 9.99 isam-bolana.
5. Trondro be dia be
Iray amin'ireo tranonkala fifaneraserana tany am-boalohany-navadika fampiharana miaraka am-piheverana mitady fifandraisana, POF dia manana mpampiasa 90 tapitrisa ao amin'ny heydey. Mbola malaza io (Statista no nametraka azy io ho laharana faharoa), ary milaza ilay fampiharana fa 2,7 heny ianao raha toa ka hiditra amin'ny resaka mandritra ny 24 ora voalohany noho ny amin'ny fampiharana hafa. Tamin'ny fandatsaham-bato ho an'ireo mpampiasa vehivavy azy, hitan'ilay fampiharana fa 44 isan-jato no reny tokan-tena ary mahita vady 10 isan-jato haingana kokoa noho ny mpampiasa antonony izy ireo. Sintomy ary swipe maimaim-poana, ary manavao mba hanampy sary bebe kokoa na asehoy voalohany amin'ireo mety ho mpiara-miasa manomboka amin'ny $ 19.99.
Rehefa avy nameno ny fangatahana sy ny fangatahana ny fampiharana (eritrereto ny mpamaky ranomandry mahazatra toy ny: “ny fihinanako biby fiompy lehibe indrindra dia ny…” ary ny “hiram-pitiavako karaoke dia…”), Hinge dia hanomboka hampifandray anao amin'ireo mpampiasa izay mitovy tombontsoana. Ilay algorithm dia manompo anao miaraka amin'ireo lalao mifanentana indrindra “ Mifanaraka Aminy indrindra ” —izay mety hiarahan'ny olona in-valo miaraka aminao, hoy izy ireo. Ary tsy ny fampiharana ihany no mampiseho aminao hoe firy ny olona no tia anao, fa milaza aminao izay zavatra tiany momba anao koa izy io, ka manamora ny fanombohana resaka.
Ny algorithm algorithm OKCupid dia mampiasa andian-panontaniana hamaritana hoe "isan-jato" hifanandranao amin'ireo mpampiasa dimy tapitrisa ao aminy. Ity fifantohana atrehin'ny fampifanarahana ity dia tena mahasarika ny vehivavy, izay nahatratra 58 isan-jaton'ireo namaly izay nisafidy ity fampiharana ity tamin'ny fitsapan-kevitra nataon'ny PCMag. Izy io koa dia tena mampiditra, manome ny maha-lahy na vavy 12 sy ny fironana ara-nofo 20 mba hahafahanao mamaritra ny tenanao na dia izany aza no tadiavinao sy mifanandrify amin'izay tena tadiavinao.
Rindrambaiko Facebook tamin'ny voalohany, Zoosk dia iray amin'ireo tranonkala mampiaraka betsaka indrindra any, miaraka amina 30 tapitrisa ny fisintomana hatramin'ny nanombohany tamin'ny 2007. Androany, manana mpampiasa mavitrika iray tapitrisa mahery izy, hoy i Statista — ary 500 000 amin'ireo no mandoa mpikambana, midika izany fa mihoatra ny antsasaky ny mpampiasa no tapa-kevitra mafy hitady lalao. Raha tokony hanery anao hameno fanontam-panontaniana lava ianao, ny algorithm an'ny app dia manamarika hoe iza no ifandraisanao mba hanatontosa tsara kokoa ny lalao mety hitranga.
Amin'izao fotoana izao, eHarmony dia anaran'ny ankohonana. Izy io no mpifaninana lehibe indrindra amin'ny Match, ary sokajin-taona roa lehibe indrindra dia 30 ka hatramin'ny 44 taona ary 55- ka hatramin'ny 64 taona. Ny fizotry ny fisoratana anarana — izay misy fanontaniana iray feno fanontaniana amin'ny antsipiriany, fanontaniana 150 - dia dia iray, saingy nilaza kosa ny marika fa tompon'andraikitra amin'ny famoronana fanambadiana 4% ao Etazonia Plus, ny mpikambana ao amin'ny famandrihana premium dia manana safidy hanohy daty vidéo alohan'ny fihaonana mivantana.
10. Nihaona tamin'i Bagel ny kafe
Isan'andro amin'ny mitataovovonana, ny Coffee Meets Bagel dia hikarakara sy handefa lalao mifaninana kalitao — na "bagel" araka ny iantsoan'izy ireo azy - nosafidian'ny algorithm. Tsy misy swiping tafiditra ary voafantina isan'andro voafetra, ity fampiharana ity dia natao mba tsy hihoatra. Fanampin'izany, ireo profil akaiky sy ireo fanontaniana "mpamaky ranomandry" dia mandrisika ny resaka misy dikany, mahatonga ity fampiharana ity ho tonga lafatra ho an'ireo mitady hanomboka fifandraisana matotra.
Miaraka amin'ny mpampiasa 14 tapitrisa mahery, i Hily dia mijoro ho "Hey, tiako ianao!" Mampiasa AI ny app mba hanatsarana hatrany ny lalao mifangaro, ary manana fiasa toa ny tantara Hily hanampy anao hisambotra tsara kokoa ny maha-ianao anao. Maimaimpoana ny fampiharana, miaraka amina fisoratana anarana tsy azo atao ho an'ny traikefa maody tsy misy doka sy incognito.
Raha mitady olon-droa Black mpitovo izay mitovy zavatra mahaliana anao ianao, BLK dia fampiharana mampiaraka izay manam-pahaizana manokana amin'ny fitadiavana izany fifandraisana izany ao amin'ny fiarahamonin'ireo mpampiasa azy. Miaraka amin'ny fisintomana 4 tapitrisa mahery, mamela anao hifanaraka sy hiresaka amin'ireo mpiara-miasa mety aminao ny fampiharana maimaim-poana. Na, havaozy ho mpikambana maha-premium ($ 10 isam-bolana) raha te hanana traikefa tsy misy doka ianao, mombamomba anao nihanahajaina, isan'ny tiako tsy voafetra, ary ny fahaizana "mamerina" amin'ny alàlan'ny fanomezana fotoana hafa an'izay olona hafa.
Nahazo fitiavana an'io mpifanila vodirindrina mahafatifaty io fa tsy mahalala ny anarany? Mifanerasera tsy tapaka amin'ny olona tsy tapaka mandritra ny dianao alika fa tsy nanomboka resaka? Happn dia fampiharana mampiaraka izay afaka manampy amin'ny fanatanterahana ireo fifandraisana toa very ireo. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny toerana amin'ny findainao dia afaka mifanandrify amin'ny olona ianao amin'ny fampiharana eo akaiky eo ihany koa. Miaraka amin'ny mpampiasa 100 tapitrisa mahery eran'izao tontolo izao, inoana fa mety hahita ilay tanàna manodidina anao fotsiny ianao.
Noforonin'ny vehivavy somary saro-kenatra, ity fampiharana LGBTQ + mampiaraka ity (sy ny sehatra ara-tsosialy) dia natao ho an'ny vehivavy sy ny olona tsy mikely aina te-hahita fitiavana amin'ny toerana azo antoka. Ho an'ireo mpampiasa 6 tapitrisa, ny HER dia manome vondrom-piarahamonina anaty rindrambaiko sy hetsika fampiantranoana mba hamporisihana ireo spark ireo hanidina.
15. Faribolana anaty
Raha tena mitady ny antsasaky ny iray hafa ianao ary te hisoroka ny fikororohana ao anaty foana, ny Inner Circle dia mitaky ny mpampiasa rehetra hanaiky ny "The Date Better Pledge" izay manome antsipiriany ny fanoloran-tena ho "feno fanajana, azo itokisana ary eken'ny rehetra." Manome mombamomba antsipiriany, sivana tsy manam-paharoa ary bitsiky ny resaka ilay app - amin'izay azonao atao ny misoroka ireo hafatra "hey" iray laharana.
Ny fampiharana mampiaraka tsara indrindra hahatonga ity iray ity ho taona iray ho an'ny fitiavana
Ny olon-drehetra mahalala olona nihaona tamin'ny "olona mandrakizay" na dia mampiaraka an-tserasera aza fa toy ny mampiaraka ihany, ny fitadiavana ny tranonkala mety aminao dia mety handramana. Ny Kochava Collective, mpampiantrano ny tsenan'ny angon-drakitra finday tsy miankina lehibe indrindra, dia nibontsina ny isa hanoroana tranonkala vitsivitsy miorina amin'ny isan'ny mpampiasa. “Manana angona azo alaina amin'ny fitaovana maherin'ny 7,5 miliara izahay”, hoy i Jake Courtright, mpitantana ny Kochava. “Ao anatin'ity seha-pikatrana ity dia manana fampahalalana momba ny 'app' (sary) momba ireo fitaovana ireo izahay, izay lisitr'ireo fampiharana napetraka amin'ireo fitaovana ireo. Nijery ireo fampiharana mampiaraka lehibe rehetra izahay tao amin'ny Google Play sy ny fivarotana app, ary avy eo dia namantatra ireo fampiharana dimy izay manana be mpametraka indrindra ao anaty ny angon-drakitra. "
Saingy satria tsy isika rehetra no mandray fanapahan-kevitra mifototra amin'ny isa fotsiny, dia novolavolainay koa ity lisitra ity tamin'ny safidy vitsivitsy hafa mety mifanaraka amin'ny toe-javatra manokana misy anao. Ny sasany amin'ireny dia mikarakara olona LGBTQ +, mpampiasa vanim-potoana iray, mpampiasa mainty na BIPOC, ireo izay manana tombontsoa manokana iraisana ary ny hafa izay mety tsy hahita ny daty lavorary amin'ny iray amin'ireo fampiharana malaza indrindra. Na mitady fialamboly mahazatra ianao, fihemorana hahafahanao miala amin'ny fisarahana na ny fifandraisanao amin'ny fotoana maharitra dia azonao atao ny manomboka amin'ny fisintomana ny iray amin'ireo fampiharana mampiaraka ireo.
Raha efa Internet mihitsy ianao dia mety mahalala an'i Tinder. Araka ny Kochava Collective, ny fampiharana dia manana mpampiasa ambony indrindra amin'ny fampiharana mampiaraka rehetra any. Raha mpampiasa marobe no mitodika any amin'ny Tinder ho an'ny fihaonana tsy dia mahazatra, ny sasany kosa mahita fitiavana lava eto.
Ao amin'ny Bumble, ny vehivavy no manomboka ny fifandraisana. Mazava ho azy, ny maha-lahy na maha-vavy manao ny hetsika voalohany dia tsy olana ho an'ny vehivavy LGBTQ +, fa ny vehivavy mitady dudes dia mety hahita rivotra madio. Nilaza i Kochava fa ny ankamaroan'ny mpampiasa azy koa dia latsaka eo amin'ny sokajy 26 ka hatramin'ny 35 taona, ka mety ho tian'ny mpamaky data ihany koa izany.
Izay rehetra efa nilalao nandritra ny fotoana fohy nandritra ny fotoana kelikely dia efa naheno momba ny OkCupid, izay efa nanomboka ny taona 2004. Ny OG izao dia manana fampiharana miaraka amin'ny fangatahana fangatahana sonia momba ny zava-drehetra manomboka amin'ny fivavahana ka hatramin'ny dibera vs jelly mba hanampiana anao hahita ny vady sahaza anao.
Amin'ireo rindranasa navoakan'i Kochava, ity no manana ny tobin'ny mpampiasa farany indrindra aorian'ny Bumble, miaraka amin'ny antsasaky ny mpampiasa azy tonga latsaky ny 36 taona. Ary, raha ny tena anarany ihany, io tranonkala io dia milaza ho iray amin'ireo sehatra mampiaraka lehibe indrindra manerantany .
Ireo mpampiasa manana tsipika fihomehezana vitsivitsy sy kofehy volafotsy vitsivitsy dia mety hahita fanahim-pianakaviana amin'ny fampiharana iray miaraka amin'ny olona maro ao amin'ny demografika. Ny angon-drakitra Kochava dia mampiseho fa ny ankamaroan'ny mpampiasa ny MeetMe dia ao anatin'ny 46 ka hatramin'ny 55 taona, manaraka akaiky ny fehezan-dalàna 55 ka hatramin'ny 65.
Ho fanampin'ny fananana toha-mpampiasa marobe, Kochava dia manamarika fa toy izany ny bandy be noho ny vehivavy misintona ny Happn, fampiharana mampiaraka mifototra amin'ny toerana. Ramatoa mitady gents, enga anie mba ho sitrakao hatrany ny olana.
Fampiharana mampiaraka tsara indrindra
Ny mpampanonta anay dia manadihady, manadihady ary manome ny vokatra tsara indrindra; afaka mianatra bebe kokoa momba ny fizotran'ny fanadihadianay eto ianao. Mety hahazo komisiona amin'ny fividianana natao tamin'ny rohy voafantina izahay.
Ny fidirana an-tsehatra eo amin'ny tontolon'ny fampiharana mampiaraka dia mety hahagaga, indrindra raha tsy azonao antoka izay hapetraka. Ny fampiharana sasany dia natao hifaneraserana amin'ny fotoana fohy, fa ny sasany kosa mandrisika ny tena hifankahafantatra alohan'ny hihaonana amin'ny cocktail na kafe FaceTime. Na mikasa ny hidina an-dalantsara ianao na hiara-mandeha, dia misy serivisy sahaza ho anao.
Eto izahay dia nanangona ny fampiharana mampiaraka tsara indrindra, mba hahafahanao mihaona amin'ny lalao misy anao — na ho an'ny alina izany na ho mandrakizay.
Fampiharana mampiaraka tsara indrindra amin'ny 2021
Tsara indrindra amin'ny ankapobeny: Hinge
Ny tsara indrindra ho an'ny fanambadiana: lalao
Ny tsara indrindra ho an'ny exclusivity: Raya
Best for Voalohany Dates: Bumble
App mampiaraka LGBTQ tsara indrindra: AZY
Ny tsara indrindra amin'ny fampiarahana amin'ny jiosy: JSwipe
Ny tsara indrindra amin'ny fampiarahana mampiaraka: Tinder
Ny antony isafidianantsika azy: manome anao fifandraisana voafetra isan'andro ny Hinge, ka mahatonga azy io ho safidy tsara kokoa ho an'ny olona mitady fifandraisana matotra kokoa.
Mizara fampahalalana bebe kokoa momba ny olona, ​​ao anatin'izany ny tiana sy ny tsy tianao
Mahatsiaro mifantoka bebe kokoa amin'ny resaka misy dikany sy fananganana fifandraisana
Ny lalao afatsy isa voafetra ihany no atolotray raha tsy mandoa vola ianao hanatsarana
Maniry ny handoa vola ny olona hanome "raozy" lalao, ka mahalasa saina ny app
Nanomboka ho toy ny fomba fampifandraisana ireo naman'ny namana sy olona ao amin'ny tambajotrao ny Hinge. Rehefa naorin'ny CEO Justin McLeod dia naneho ny mombamomba ny olona miorina amin'ny akaiky izany ary koa ny namana Facebook izay iraisan'izy ireo iraisana. Ankehitriny, mampifandray tsotra ireo mpampiasa amin'ny olona akaikin'ny manodidina nofidiny izy ireo.
Afaka misafidy ny hifandray amin'ny olona iray ireo mpampiasa amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra ifampiresahana sy fampifanarahana na famelana hevitra amin'ny pejy iray. Nanolotra bitsika ny propiles mba hanombohana ny resaka toy ny hoe "Raha tsy tia an'ity dia tsy tiako ny marina ..." sy "Ny zavatra iray tiako ho fantatra momba anao dia…."
Mampiseho aminao bebe kokoa momba ny olona ny hinge, koa raha tsy mahazo aina ianao mihaona amin'ny olon-tsy fantatra amin'ny Internet dia manamora kokoa izany. Manome anao ny anarana farany ananan'ny olona izy io ary mazàna ny manodidina azy, ny taonany, ny halavany, ny asany, ny tanàna niaviany ary ny oniversite misy azy.
Maimaimpoana ilay rindranasa saingy maniry ny handoavan'ny olona, ​​mangataka azy ireo handoa ny "raozy" virtoaly tiana hilazana ny lalao miavaka ampiasain'ny serivisy ho anao mifototra amin'izay tadiavinao. Mahatsiaro ho toy ny fizarana amin'ny The Bachelor daholo izany rehetra izany . Ny algorithms isan'andro fividianana ny lalao tsara indrindra dia malaza koa fa tsy manampy. Imbetsaka izy ireo no misafidy olona lavitra be na miaraka amina antoko politika tsy mitovy. Amin'ny tranga sasany dia mety hasehony anao ny olona efa fantatrao izay mety tsy mahazo aina kely.
Tsy toy ny rindranasa hafa izay tokony hifanarahanareo roa hifanaraka alohan'ny handefasana hafatra, ny olona ao amin'ny Hinge dia afaka mandefa hafatra ho anao mpanokatra mba hanatanterahana ilay resaka. Na dia maimaim-poana aza dia misy kinova aloa ihany koa. Ny Membership Preferred dia manodidina ny $ 30 mandritra ny iray volana, $ 60 mandritra ny telo volana, na $ 90 mandritra ny 6 volana ary mamela anao handefa rohy tsy voafetra ary hametraka sivana henjana kokoa.
Ny antony nifidianantsika azy: nifidy lalao izahay satria io no safidy tsara indrindra ho an'ireo daters matotra izay mieritreritra fanambadiana.
Ny mpikambana dia mikaroka fatratra fifandraisana na fanambadiana
Manome fampahalalana marobe momba ny lalao mety ho an'ny mpampiasa ny mpampiasa
Ny safidy malalaka dia manome topy maso ireo mpampiasa fotsiny, tsy misy fomba hidirana amin'ny lalao na hafatra
Satria fampiharana andoavanao vola dia raisin'ireo mpampiasa ho zava-dehibe kokoa izany
Ny safidy amin'ny lalao Match ihany no azonao atao
Ny match dia standby taloha noho ny antony. Satria ny mpampiasa dia tsy maintsy mandoa vola amin'ny maha-mpikambana azy, midika izany fa mifantoka amin'ny fanoloran-tena ireo olona miditra. Ny Match.com dia natsangan'i Gary Kremen sy Peng T. Ong tany San Francisco tamin'ny taona 1993. Nanomboka teo dia nalaza foana izy io, indrindra amin'ireo olona izay mitady fifandraisana matotra.
Rehefa misoratra anarana ianao dia mampiditra ny anaranao, ny taonanao, ny hahavonao, na tianao ny ankizy na tsia, ny maha mpitovo anao, ary raha mifoka ianao. Valio ny fanontaniana hoe "Inona no mahafaly anao indrindra?" misafidy amin'ireo hetsika atao ao anatin'izany ny kaonseritra, ny fandrahoan-tsakafo, ny fanaovana bilaogy, ny seho mijery binge, ny fanatanjahan-tena sy maro hafa Avy eo, mifidy izay tadiavinao amin'ny mpiara-miasa ianao, ao anatin'izany ny sokajin-taona, ny halavany, ny fivavahana ary na tsia ireo lohahevitra ireo dia "tsy maintsy ananana."
Miaraka amin'ny safidy maimaim-poana, ny mpikambana dia mahazo hafatra voafetra avy amin'ny "top picks" izay nofidian'ny Match ho azy ireo mifototra amin'ny fifanarahana. Ny safidy premium dia ahafahan'ny mpikambana mandefa hafatra, tiany, fahaizana mahita ny olona rehetra tia anao ary nijery ny mombamomba anao, lahateny iray nifanaovana tamina manam-pahaizana momba ny fiarahana, sy maro hafa.
Mampalahelo fa raha te hampiasa Match ianao dia tsy maintsy mandoa vola; raha tsy izany dia tsy ho hitanao izay mandefa hafatra aminao na izay lazain'izy ireo. Ny mpikambana dia mitentina $ 18 isam-bolana ho an'ny drafitra isan-taona, $ 22 isam-bolana eo ho eo mandritra ny enim-bolana, ary manodidina ny $ 30 mandritra ny telo volana.
Maninona isika no misafidy izany: Raya dia malaza amin'ny maha-rindrambaiko fampiarahana mampiaraka izay matetika alain'ireo olo-malaza sy mahery.
Ny mpikambana dia manaja sy mahaliana
Ny maha-miavaka ny fampiharana dia mahaliana sy mahaliana kokoa
Mampientam-po ny mahita piraofilina mampiaraka malaza
Ny mpikambana dia tsy maintsy mandoa vola isan'andro isan'andro raha toa ka mahatratra ny fetra isan'andro
Amin'ny iPhones ihany no miasa
Raya dia malaza amin'ny maha-iray amin'ireo fampiharana mampiaraka tsy manam-paharoa, miantso ireo mpihaino A-listers sy influencers ho mpikambana. Satria ny fanasana ihany no misy, misy ny fizotran'ny fangatahana ary mila mandoa vola ny olona vao ho mpikambana, misy antso avo kalitao kokoa noho izany amin'ny fampiharana mahazatra.
Ny Raya dia eo amin'ny $ 7 isam-bolana ary afaka mandroso amin'ny olona manerana an'izao tontolo izao ianao. Raha mahatratra ny zavatra tianao isan'andro ianao dia afaka mandoa $ 7 eo ho eo amin'ny 30 isan'andro isan'andro, na afaka miresaka fotsiny amin'ireo fifandraisana misy anao ankehitriny, izay amporisihin'ny fampiharana anao. Raha vantany vao mpikambana ianao dia afaka manome namana loloha namana izay afaka manampy amin'ny fanafainganana ny fidiran'izy ireo, na dia manan-jo handà fangatahana aza ny fampiharana.
Ny mpikambana dia hita manerana an'izao tontolo izao ary mirona amin'ny sehatry ny famoronana. Amin'ny ankapobeny Soho House ho an'ny mampiaraka. Azonao atao ny mampifandray ny kaontinao Instagram, misafidy hira, manao sary-tsary, ary afaka mitady fifandraisana romana na namana. Azonao atao koa ny mitady amin'ny toerana hahitanao hoe iza no eo akaiky eo amin'ilay fampiharana. Hampiseho aminao ny sakaizanao miaraka i Raya raha samy manana nomeraon-telefaona namana iray ianao, amin'izay dia azonao atao ny manontany ny palanao raha manome toky ny amin'ny daty mety hitranga ianao. Azonao atao ihany koa ny mitady mpikambana ao amin'ny tanàna iray na amin'ny indostria manokana, ka hanamora kokoa ny fampitana tambajotra na fihaonana amin'ny olona.
Ny tsara indrindra amin'ny daty voalohany: ambany
Ny antony isafidianantsika azy: manana hevitra tsy manam-paharoa i Bumble: vehivavy aloha ny hafatra ho an'ny lehilahy ary omena 24 ora hamaly izy ireo, ary manao azy ho fampiharana natosiky ny vehivavy.
Mora mifandray amin'ny olona maro indray mandeha
Hafatra vehivavy aloha mba hahafahan'izy ireo misafidy ny lohahevitra
Miorina amin'ny toerana hahitanao ny olona akaiky anao raha miala sasatra ianao na any amin'ny tanàna vaovao
Afaka mamaly mora foana amin'ny fomba tsy mahazo aina ny lehilahy ary misy ny fanenjehana bebe kokoa
Lehilahy maro no tsy mitanisa fampahalalana betsaka momba ny tenany
Manana fotoana voafetra ianao hampiasa mpanokatra, noho izany dia mila manamarina ny fampiharana matetika ianao
Rehefa natombok'ilay vehivavy mpanorina an'i Whitney Wolfe i Bumble tamin'ny 2014, dia nifototra tamin'ny hevitra hoe vehivavy ny hafatra voalohany, midika izany fa afaka misafidy mpanangana resaka sy mifehy ny fitantarana izy ireo. Wolfe dia nanohy nanao ny lisitra Forbes 30 latsaky ny 30 ary koa ny lisitra Time 100 ary nanjary vehivavy tanora indrindra nanao orinasa ampahibemaso tamin'ny 31 fotsiny.
Tsotra be ny fampiasana Bumble. Manaova piraofilina miaraka amin'ny sarinao sy ny mombamomba anao momba ny tenanao, ary avy eo ianao dia afaka manana drafitra maimaimpoana na mandoa safidy hafa. Ny drafitra "Spotlight" dia mampanantena lalao 10 heny mihoatra ary mametraka anao eo alohan'ilay tsipika mandritra ny 30 minitra mba hahitan'ny match anao anao voalohany. Azonao atao ny mandoa $ 1 ho an'ny jiro miisa 30, na $ 6 eo ho eo ho an'ny jiro tokana. Na afaka mahazo spotlight 30 ianao amin'ny $ 50 eo ho eo.
Ny safidy hafa dia ny SuperSwipe, izay milaza fa hahazo "hatramin'ny 10x resaka maro hafa ianao." Ny SuperSwipes dia mamela anao hitia olona lehibe, ka rehefa manomboka mifindra izy ireo dia ho iray amin'ireo olona voalohany hitany. Manodidina ny $ 1 amin'ny SuperSwipe 30 ary $ 3 isaky ny SuperSwipes roa. Raha tsy tianao ny mandoa ireto safidy roa ireto dia azonao atao ihany koa ny manavao ny kaontinao ho premium hamaha ireo fiasa rehetra indray mandeha. Ireo mpampiasa premium dia manavao ny $ 18 eo ho eo ary avy eo mahazo fitadiavana tsy manam-petra, sivana mandroso, fomba fitsangatsanganana mba hahitanao hoe iza no mivezivezy amin'ny toerana sasany ary backtracks tsy voafetra raha sendra diso lalana amin'ny olona iray ianao, ankoatry ny fiasa hafa.
Bumble dia safidy tsara ho an'ny olona iray manomboka te-hahita ny olona mendrika rehetra manodidina. Mila mikosoka havanana ianao mba hifaneraserana amin'ny olona, ​​ary avy eo manana 24 ora hanaovana ny hetsika voalohany ianao ary hanomboka ny resaka, noho izany dia mila manamarina ny fampiharana matetika ianao, raha tsy izany dia tapitra ny lalao. Ny lehilahy avy eo dia manana 24 ora hamaliana. Azonao atao ny mikaroka ilay app amin'ny sivana, misafidy hoe iza no tianao (lehilahy, vehivavy, na olon-drehetra), isan-taona sy halavirana. Azonao atao ihany koa ny manamboatra sivana mandroso, mitady ny halavany manokana, famantarana ny fanandroana, ny fampianarana ambadiky ny maro hafa.
Ny tsara indrindra amin'ny fiarahana amin'ny LGBTQ: AZY
Maninona isika no mifidy azy : nisafidy AZY isika satria io no fampiharana mampiaraka maimaim-poana lehibe indrindra ho an'ny vehivavy LGBTQ.
AZY no fampiharana mampiaraka maimaim-poana lehibe indrindra ho an'ny vehivavy lesbiana sy vavy tsy mendrika
Mizara vaovao LGBTQ + sy hetsika eo an-toerana ny fampiharana, manome toerana azo antoka
Mitaraina ny olona fa misy mpivady mitady telopolo ao amin'ilay fampiharana
Raha tsy mandoa vola ianao dia mila miandry ora maromaro vao hikosehana bebe kokoa
I HER no rindrambaiko mampiaraka maimaim-poana lehibe indrindra eran'izao tontolo izao ho an'ny vehivavy hafahafa, manome ny fahafaha-milalao, ary koa manome vaovao momba ny fihaonana eo an-toerana amin'ny toerana azo antoka. Miasa amin'ny maha-vondrom-piarahamonina azy ny fampiharana ary manandrana mandray sy manampy azy ireo.
Toa an'i Tinder, i HER dia momba ny fikosehana. Ny swipe left dia midika fa tsy liana amin'ilay olona ianao, fa ny swipe kanan (na fo emoji) dia midika hoe te hahafantatra ilay olona ianao. Avy eo, afaka manapa-kevitra ilay olona raha mifampitondra ilay fahatsapana ary mandefa hafatra aminao.
Na dia maimaim-poana aza dia misy ihany koa ny karazana mpikambana amin'ny famandrihana premium. Ny premium, iray volana isam-bolana dia manomboka amin'ny $ 15, mandritra ny enim-bolana dia manodidina ny $ 60 ary mandritra ny herintaona dia 90 $ eo ho eo.
Ny antony isafidianantsika azy : JSwipe dia safidy tsara ho an'ny Jiosy jiosy hikosehana sy hivory, na aiza na aiza toerana itoerany.
Fahaizana mihaona amin'ireo mpitovo jiosy mora foana
Ny fisehanan'i App dia manahirana ny mahita hoe avy aiza no iorenan'ny olona na ivoahany
JSwipe dia safidy tsara raha jiosy ianao na te hiaraka amin'ny lehilahy na vehivavy jiosy. Nalefa tamin'ny 2014 ny Paska nataon'ny mpanorina David Yarus, izay niasa ho an'ny Birthright Israel sy Hillel tamin'izany fotoana izany, ny fampiharana monina any Brooklyn dia azon'ny mpifaninana aminy, JDate.
Ao amin'ny JSwipe dia mampiditra bio fohy, fanabeazana ary taonanao ianao. Angatahina aminao ihany koa ianao hameno na mitazona kosher sy ny antokom-pivavahanao na tsia. Avy eo, azonao atao ny manomboka mifintina. Mampifandray ny pejinao Facebook ny pejin'ny piraofilinao, amin'izay dia hampiseho aminao izay mahaliana anao zarainao amin'ny lalao mifototra amin'ny zavatra tianao taloha tao amin'ny Facebook.
JSwipe dia manolotra kinova maimaimpoana, ary koa ny maha-mpikambana ao amin'ny kilasy voalohany, izay ahafahanao mandeha amin'ny hetsika manokana ary mahazo tombony toy ny zava-pisotro sy mpivarotra maimaimpoana. Ny kinova manokana dia ahafahanao mahita izay nitia ny piraofilinao ihany koa, nanatsara ny mombamomba anao ho an'ny lalao maro hafa, swipe
Ny mpikambana iray volana dia eo amin'ny $ 25, $ telo eo ho eo ny telo volana ary $ 60 ny mpikambana iray volana. Tahaka an'i Tinder, asehony anao hoe iza no miodina manodidina anao mifototra amin'ny toerana misy anao, fa azonao atao koa ny mametraka ny refin'ny kilometatra lehibe kokoa ary mahita mpitovo manerantany.
Maninona izahay no mifidy azy : tsy azonao atao ny tsy miraharaha ilay fampiharana mampiaraka tany am-boalohany, Tinder, izay niteraka ny fikosehana. Mety ho an'ny hook-ups na fiarahana maharitra.
Tonga lafatra amin'ny fanobohana ny rantsan-tongotrao amin'ny tontolon'ny fiarahana amin'ny Internet
Mora ny fitetezana, indrindra ho an'ireo vao manomboka fampiharana
Ny iray amin'ireo safidy mahazatra indrindra dia mifantoka kokoa amin'ny hook-up
Manasongadina ireo safidy tsy misy farany sendra anao rehefa misosa
Tinder tokoa no fampiharana nanombohana azy rehetra. Nanomboka tamin'ny 2012 izy io ary nanova ny tontolon'ny fiarahana mampiaraka mandrakizay, mampiditra olon-tokana amin'ny tontolon'ny fikolokoloana havia na havanana hifanandrinana amin'ireo olona mety ho fatoriana na olon-dehibe matotra.
Ary na dia be dia be aza ny olona mitady zavatra isan-karazany, dia vao mainka mitarika ny mampiaraka izany. Tinder angamba no tsara indrindra any amin'ny tanàna kely izay tsy dia be loatra ny olona amin'ny fampiharana bebe kokoa fa fantany tsara fa mitady fikarakarana tsy ara-potoana bebe kokoa ny olona.
Raha toa ka fampiharana maimaimpoana tanteraka no nanombohany, misy safidy premium maimaim-poana sy maimaim-poana ankehitriny izao izay ahafahan'ny mpampiasa mampiasa "olona tena tia" (endrika fandokafana fanampiny izay voalaza fa mitombo ny fahafaham-ponao amin'ny lalao iray), ampiasao ny endrika pasipaoro hijerena izay mivoaka any amin'ny toerana hafa, ary jereo hoe iza no tia anao talohan'ny nifindranao ho azy ireo. Ny Tinder Gold dia manome izany rehetra izany ho an'ny mpampiasa ary mihoatra ny $ 15 isam-bolana, raha ny Tinder Platinum kosa manome ireo mpampiasa ireo safidy ireo ary koa ny fahaizana mandefa hafatra amin'ny olona iray alohan'ny hifanandrany mandritra ny $ 10 isam-bolana mandritra ny enim-bolana.
Ny fampidinana fampiharana fampiharana dia mety ho toy ny fanoloran-tena lehibe ary hahatsapa ho somary mangirifiry raha tsy azonao antoka izay tokony hanandramana voalohany, satria samy hafa be ny fihiratany. Hinge no safidy tsara indrindra raha mitady ho matotra kely kokoa amin'ny resaka fampiharana ianao. Manome anao fampahalalana bebe kokoa momba ny daty mety hitranga izy io ary mandrisika ny resaka misy dikany bebe kokoa. Mety tsara i Raya raha manantena hahita olo-malaza ianao na te hifandray amin'ny zavakanto mitovy hevitra aminy, saingy mety ho sarotra ny manasa azy.
Bumble dia tsara raha manantena ny hanao daty voalohany ianao. Tsy dia miresaka aminao momba ny olona ny fampiharana, fa manamora ny fikosehana tsy misy farany ary manomboka miresaka. Eritrereto bebe kokoa toy ny fihaonana am-pahatsorana olona eny amin'ny fisotroana. Raha mitady hiaraka amin'ny vehivavy ianao ary maniry fampiharana iray manokana ho an'izany, AZY no tsara indrindra azonao. Ary raha te hitandrina azy io foana ianao dia i Tinder no mpino taloha noho ny antony.
Ahoana ny fomba fiasan'ny fampiharana mampiaraka?
Ny rindranasa sasany dia mitaky ny roa tonta hikosoka tsara raha liana izy ireo ary avy eo mamela anao hifandray. Ny hafa kosa mamela olona iray handefa hafatra, ary avy eo ny mpandray dia afaka manapa-kevitra raha te hamaly izy ireo na tsia. Ny sasany amin'ireo fampiharana dia manome fampahalalana marobe, ao anatin'izany ny oniversite, ny haavony, ary na mila olona na tsia ny olona, ​​ny sasany kosa hampiseho aminao fotsiny ireo mpiara-miasa mety ho akaiky nefa tsy misy fampahalalana marobe.
Misy safidy maimaim-poana sy karama ve amin'ny fampiharana mampiaraka?
Maimaimpoana ny ankamaroan'ny fampiharana mampiaraka, na farafaharatsiny manana safidy maimaim-poana ary koa safidy premium sy karama. Ny safidy malalaka dia mazàna manome ny olona ny safotra, ary ny fandoavam-bola dia mamela ny olona hiavaka kokoa, ny fametrahana filtre izay tsy mampiseho afa-tsy haavo, fivavahana na fironana politika. Ho an'ny ankamaroan'ny fampiharana dia mora be ny misintona azy ireo ary avy eo mampiasa ilay kinova maimaimpoana raha tsy mitady zavatra tena voafaritra tsara ianao. Ny fampiharana sasany, toa ny Raya, dia mitaky ny fandoavan'ny mpampiasa rehetra vola kely isam-bolana. Matetika, kely kokoa ny sarany raha mandoa volana vitsivitsy na mihoatra ianao.
Ohatrinona ny vidin'ny fampiharana mampiaraka?
Ny fampiharana mampiaraka dia manomboka amin'ny $ 100 ka hatramin'ny $ 100 raha mahazo kinova premium ianao ary manambola mandritra ny volana vitsivitsy amin'izany. Ny safidy farany lafo indrindra dia hanome anao tolotra premium manatsara ny mombamomba anao, na mametraka anao amin'ny sain'ny olona mety hifanaraka na hanome anao safidy handefasanao hafatra nefa tsy mifanaraka aloha.
Nanontany manam-pahaizana momba ny fampiharana izahay, namaky hevitra ary nandinika ny zavatra niainantsika nandritra ny taona maro nampiasana azy ireo. Izahay koa dia nitady rindranasa izay manome fampahalalana marobe momba ny hafa, ary koa ny fahalalahana raha ny momba ny drafitra fandoavam-bola. Zava-dehibe ho anay ny manolotra safidy isan-karazany amin'ny safidin'olon-droa, na fiarahan'olon-droa, daty voalohany, na fanambadiana mihitsy aza. Ny fampidirana dia zava-dehibe ihany koa amin'ny famaritana ny safidintsika, noho izany ny fampiharana mirakitra fironana ara-nofo sy fivavahana samihafa no nahatonga an'io lisitra io.